War Cusub: Qoondada Haweeynka ee Aqalka Hoose iyo Aqalka Sare oo Musuqmaasuq looga Baqdin qabo Xili ay soo Baxayan Warar sheegaya in….. | Kismaayo24 News Agency
War Cusub: Qoondada Haweeynka ee Aqalka Hoose iyo Aqalka Sare oo Musuqmaasuq looga Baqdin qabo Xili ay soo Baxayan Warar sheegaya in…..
Monday November 14, 2016 - 4:14 under Somali News by Tifaftiraha K24
Guux dhiilo xambaarsn ayaa waxaa hareeyey Nidaamka ay ku dhaceen Doorashadda xubnaha ka mid noqonayo Aqalka Sare iyo Aqalka Hoose ee Barlamaanka Federalka ee soo socda.
Ku-shubasho, Musuq iyo La-macaamiltanka Ergooyinka Doorashadda ayaana la sheegaa inay yihiin qaladadka saamaynta xooggan ku yeeshay Doorashooyinkii ka kala socday Caasimadaha Maamul-gobaleedydda hoos yimaada Dowladda Federalka ee Somalia.
Qaladaadka laga dhex arkay Cod-bixinta lagu dooranayey Xildhibaanadda Labada Aqal ee Barlamaanka soo socda ayaa noqday kuwo ay ka hadleen Guddiga Doorashadda Dadban ee Federalka iyo Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan in Guddoonka Guddiga Doorashadda Dadban ee Federalka si fiican u gudanayaan Waajibaadka Qaranka iyo in loo gogol-xaaro sii ay Doorashooyinka u noqdaan kuwo ku dhaca Xaq iyo Hufnaan.
Hoggamiyayaasha Dhaqanka Soomaaliyeed oo iyagu ah Farsama-yaqaanadda Bulshadda waxaa lagu xusuustaa sida ay ugu halgameen xalinta Khilaafaadka Bulsho iyo kuwa Siyaasadeed,.
Odayaasha Dhaqanka waxay kaloo qeyb muhiim ah ku lahaayeen Arrimaha dib-u-heshiisiinta iyo Shirarka looga tashanayey Dib-u-dhiska Dowladnimo ee Somalia.
135 Oday Dhaqameed ayaana noqday Halyeeyo lafdhabar u ah Awood-qeybsiga Siyaasadeed ee ay Beelaha Soomaaliyeed ku wadaagaan Xilalka Hoggaanka Sare ee Dowladda iyo Hay’addaha kale ee ku sidkan.
Hoggaamiye-dhaqameedyadaasi waxay asaas u dhigeen sidii loo taaba gelin lahaa Nidaamka Doorashadda ee sannadka 2016-ka, taasi oo lagu soo dooranyo Xildhibaanadda Labada Aqal ee Barlamaanka soo socda.
Waana hawl dhiiro-gelin mudan, balse qaar ka mid ah Odayaasha ayaa muujinaya in doc-docayn iyo faragelin lagu hayo Hawlihii loo idmaday.
Odayaasha waxay saluug xad-dhaaf ah ka muujiyeen sida loogu xad-gudbayo Qoondda Haweenka ku leeyihiin Labada Aqal ee Barlamaanka soo socda.
Qeylo-dhanta Odayasha mid la mid ah waxaa muujiyey Guddiga Guddiga madaxa banaan ee xalinta khilaafaadka Doorashada dadban. , kuwaasi oo ka digay inay Beelaha sed-bursi ku sameeyaan Qoondada 30% ee u gaarka ah Haweenka.
Guddiga madaxa banaan ee xalinta khilaafaadka Doorashada dadban. waxa uu ku adkeynayaa Guddiga Federalka ee Doorashadda Dadban iyo Guddiga Dawlad-gobaleedyadda ee Hirgelinta Doorashadda Dadban in ay hirgeliyaan go’aankii ay soo saareen Madasha Hoggaanka Qaran ee ku xusnaa warmurityeedkii ku taariikheysnaa 14ka September ee la xiriiray qoondada haweenka “ Qabiilkii leh saddex kursi in uu u asteeyo hal kursi oo ay ku tartamaan Musharrixiin Dumar ah oo kaliya”.
Waxaa ina soo gaaraya xog sheegeysa in Doorashada ka bilaabatay xarumaha qaarkood aan laga tixgelin kuraasta qoondada haweenka. Sidaa awgeed Guddiga Madaxa Banaan ee Xallinta Khilaafaadka Doorashada Dadban waxa uu xasuusinayaa in Masuuliyadda hubinta qoondada haweenka uu leeyahay Guddiga Heer Federaal.
Ha yeeshee, Guddiga madaxa banaan ee xalinta khilaafaadka Doorashada dadban.waxa uu dib u eegis ku sameynayaa hirgelinta qoondada haweenka, haddii ay cadaato in qabiilada leh saddex kursi, oo saddexdoodiiba rag ku soo baxeen in natiijooyinka soo baxay ee kuraasta loo codeeyay ku imaan karaan isbadal kadib baaritaanada iyo go’aan gaarista Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashooyinka Dadban oo leh Awooda iyo go’aanka kama danbeysta ah.
Si kastaba ha ahaatee, Qoondada Haweenka ku leeyihiin Labada Aqal ee Barlamaanka ayaa habboon in laga dhabeeyo, mana aha in Qoondada Haweenka laga dhigo midba mugdi la geliyo, iyo inay xaalladana u muuqato sidii “La-jiifiyaa bannaan, La-toosiyaana bannaan” oo kale.
One thought on “War Cusub: Qoondada Haweeynka ee Aqalka Hoose iyo Aqalka Sare oo Musuqmaasuq looga Baqdin qabo Xili ay soo Baxayan Warar sheegaya in…..”
Cabdi Cali 15th November 2016 at 1:35 am